U-Emanuel Steward | Indawo yokuzivocavoca yaseKronk | Umqeqeshi odumileyo
Igqala lomqeqeshi weGym Gym
U-Emanuel Steward 1944-2012
U-Emanuel “Manny” Steward (nge-7 kaJulayi ngo-1944-ngo-Okthobha u-25, ngo-2012) wayengu- Umlo wamanqindi waseMelika, umqeqeshi kunye nomsasazi weHBO Boxing. USteward uqeqeshe abagqatswa beentshatsheli abangama-41 kuwo wonke umsebenzi wakhe, ngakumbi uThomas Hearns, ngeKronk Gym edumileyo kwaye kamva noLennox Lewis kunye noWladimir Klitschko. Umlo wakhe onzima wayedinga irekhodi lama-34-2-1 elixutywe kwiingxabano zamagama. Wayekwangumbonisi wale Holo yamanqindi yaMazwe ngaMazwe, kunye neHolo loDumo lomdlalo wamanqindi weHlabathi. USteward wayedume ngomsebenzi wakhe wesisa eDetroit, eMichigan, enceda ulutsha ukuba lufumane imfundo.
USteward wazalelwa e-Bottom Creek, eNtshona Virginia, nangona kunjalo, xa wayeneminyaka eli-12 ubudala, waye wafuduka kunye nomama wakhe baya eDetroit, eMichigan, emva kokuba eqhawule umtshato notata wakhe, owayengumgodi wamalahle. Emva kokuya eDetroit, wasebenza okwethutyana kwishishini lezeMoto ngaphambi kokundwendwela iZiko loLonwabo laseBrewster, apho uJoe Louis kunye noEddie Futch baqeqeshwa khona. USteward waqala umsebenzi wokudlala amanqindi apho. Waqokelela irekhodi lama-94 aphumeleleyo kunye nelahleko ezi-3 okoko walwa engahlawulwayo, kubandakanya ukuphumelela ubuntshatsheli beGloves yeGloves kwilizwe lonke kwisebe le-bantamweight.
Ngo-1971, uSteward wakhetha umntakwabo, uJames Steward, waya eKronk Gym, ibhedi eshushu yeembethi manqindi eziyiminyaka yoo-1970, naye ekugqibeleni waba ngumqeqeshi wethutyana apho. USteward uqeqeshe uninzi lwabona bafundi bangcono kwilizwe. Ekugqibeleni waguqula uloyiso lwakhe kunye nabafundela uqeqesho kwinqanaba lobuntshatsheli.
U-Steward uphumelele uloyiso lwakwangoko kunye no-Thomas Hearns we-welterweight, othe washiya ukukhanya ebetha umlo waba phakathi kwezona zitshabalalisi zibalulekileyo kwimbali yamanqindi. U-Hearns waba phakathi kwabalwi baka-Steward abasebenzayo nabaziwayo, elwa noSugar Ray Leonard, ebetha uRoberto Durán, kwaye ecela umngeni kwi-Middleweight Champion Marvelous Marvin Hagler.
U-Steward uphinde waqeqesha u-Eminem, umlobi weendlela, e-Detroit, eMichigan.
USteward waphelelwa lixesha ngo-Okthobha 25, 2012, emva kokwenziwa kotyando ukuze afumane i-diverticulitis. Wayeneminyaka engama-68. Umhlaza wamathumbu waxelwa njengoyena nobangela ekumkeni kwakhe.
U-Ken Hershman, umongameli we-HBO Sports, apho u-Steward wayesebenze njengo mhlomli ngo-2001, wapapasha ingxelo, esithi: “Akukho magama aneleyo okuchaza inani elikhulu lokuphelelwa lithemba kunye nelahleko sonke esiziva kwi-HBO Sports sisebenzisa uhambo olubi kaManny Steward. Kwisithuba seminyaka elishumi, uManny wayengumlingane ohlonitshwayo owasifundisa okuninzi kungekuphela malunga nesayensi kodwa kunye nokunyaniseka nobuhlobo. Amandla akhe, umdla kunye noncumo oluqaqambileyo zazikho rhoqo. Iintsimbi ezilishumi azibonakali zanele ukulilela ukusweleka kwakhe. Igalelo lakhe kumdlalo nakwi-HBO alisokuze lilibaleke. Sithandaza nabantu esibathandayo. ”